အခြား Djamila ဘရာဇီး Ribeiro, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအတွက်စေ့စပ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "တခြား Djamila ဘရာဇီး Ribeiro, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအတွက်စေ့စပ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် - JeuneAfrique.com
အခြား Djamila ဘရာဇီး Ribeiro, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအတွက်စေ့စပ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် - JeuneAfrique.com
ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်နှင့်ကထိက, Djamila Ribeiro လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများနှင့် sexism ဆန့်ကျင်ဖျက်သိမ်းရန်နှင့်လိင်တူချစ်သူလူများ၏အခွင့်အရေးကာကွယ်။ © DR / Anacaona edition မှာ / ဂျူလီယာ Rodrigues
ကျူးလွန်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်, Djamila Ribeiro လူမည်းများနှင့်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများလူတို့တဘက်၌လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတစ်ဦးစိတ်စိတ်အမွှာမွှာအမျိုးသားရေးဇာတ်ကြောင်းများကထိန်းသိမ်းထားအားဖြစ်နေဆဲရှိရာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်အားလုံးခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုတိုက်ဖျက်။ ပုံတူ။
ဘရာဇီးနှင့်အတူ Djamila Ribeiro Evoking "နောက်ဆုံးတော့သူကကိုပြောပြ" တဲ့ကြယ်ပွင့်များ၏ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်တတ်သူတစ်ဦးဒဿနပညာရှင်တစ်ဦးဉာဏစကားပြောဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘရာဇီးစာရေးဆရာနှစ်ခုအကျင့်ကိုကျင့်ထုတ်ဝေသူကို Paula Anacaona, ဘာသာပြန်ဆိုသူနှင့်အယ်ဒီတာ, အဆိုအရ "တစ်ဦးကလူမှုရေးဖြစ်ရပ်ဆန်း,": အနက်ရောင်မိန့်ခွန်းထားပါ et အနက်ရောင်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲအပေါ်ရာဇဝငျခြု.
သူမတစ်ဦးဟာဥရောပခရီးစဉ်စတင်ဘယ်မှာ Rennes, ခုနှစ်, Djamila Ribeiro အမျိုးသမီးနှင့် antiracist အဖွဲ့အစည်းက deconstruct လုပ်ရန်နှင့်အတူဖလှယ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးဖိတ်ကြားချက်ကိုစုပေါင်းဘရာဇီးနှင့်အတူနေ့ကိုအပြီးသတ်ဖို့ကြိုတင်ကျောင်းသားများကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အခန်းထဲမှာအားလုံးစိတ်ဝင်စားလဲလှယ်တို့သည် လာ. လိုက်လျောညီထွေနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏, ဘယ်သူကိုဖြစ်ခြင်းများအတွက်နိုင်ဘူး "အနက်ရောင်အမျိုးသမီးဒီမိုကရေစီစီမံကိန်းကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ " လူ့အခွင့်အရေးကိုထမ်းနေ့စဉ်တိုက်ခိုက်မှုများကြားမှမျှော်လင့်ပါတယ်လေိုကွောငျးတခုရည်မှန်းချက်, အစွန်းရောက်အစိုးရ
Ashura: ပွဲလမ်းသဘင် "အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ဝိညာဉျကိုးကွယ်"